ေရေက်ာ္ပြဲေစ်းကို ခ်စ္သူနဲ႔ တူတူလည္မယ္ – Amazing Yangon
The One Championship
ေရေက်ာ္ပြဲေစ်းကို ခ်စ္သူနဲ႔ တူတူလည္မယ္
Home /Event/ေရေက်ာ္ပြဲေစ်းကို ခ်စ္သူနဲ႔ တူတူလည္မယ္
ႏွစ္စဥ္မျပတ္ စည္ကားစြာ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ေရေက်ာ္ပြဲေစ်း ဒီေန႔မွာပဲ စတင္ၿပီျဖစ္တာမို႔ ရန္ကုန္ရဲ႕ သတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ ႏွင့္အတူ ပြဲေစ်းေလွ်ာက္ရင္း မုန္႕ေတြစားမယ္ ဓာတ္ပံုေတြရိုက္မယ္ ရဟတ္စီးခ်င္သူေတြကို သတင္းေကာင္းေလး လက္တို႔လုိက္ပါတယ္။ ေရေက်ာ္ပြဲေစ်းရဲ႕ ပံုမ်ား သတင္းမ်ားကိုလည္း မျပတ္တင္ဆက္သြားပါမယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ share ေပးလိုက္ၾကပါအံုးေနာ္…
???ရန္ကုန္ရဲ႕ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈေတြကို ပိုမိုသိဖို႔ amazingyangon.com Page ကို Like & Share လုပ္ထားလုိက္ပါ။
The Queen မွ ​ေက်းဇူးတံု႔ျပန္​​ေသာ အားျဖင္​့ ခ်စ္​ရ​ေသာ မိတ္​​ေဟာင္​း Customer မ်ားအတြက္​ သီးသန္​႔ Promotion
Announcing Lucky Draw Winners of Limited Edition T-Shirt & Autograph Card
Art reflects everyday justice realities November 23, 2019
Well-known contemporary Myanmar artists have joined together with MyJustice to encourage ordinary people to reflect on what justice means and what role they play in seeking it. The Everyday Justice exhibition will launch in the newly renovated Tourist Burma building on Friday 15 November, after which it will be free and open to the public […]
နေ့စဉ်ဘဝထဲမှတရားမျှတမှုကို အနုပညာနှင့်ဖန်တီးပုံ‌ဖေါ်ခြင်း November 23, 2019
မြန်မာဖန်တီးမှုအနုပညာရှင်များနှင့် MyJustice တို့ ပူး‌ပေါင်းကာ တရားမျှတမှု၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့် တစ်ဦးချင်း၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပြည်သူလူထုအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖန်တီးတင်ဆက်မည်။ အဆိုပါ အနုပညာ ပြပွဲကို “တရားမျှတ နေ့စဉ်ဘဝ” ခေါင်းစဉ်နှင့် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပြီး ပြပွဲဖွင့်ပွဲကို မကြာခင်က ပြန်လည်မွမ်းမံခဲ့သော Tourist Burma အဆောက်အဦတွင် နိုဝင်ဘာ ၁၅ရက်နေ့၌ ပြုလုပ်မည်။ ပြပွဲကို မည်သူမဆို အခမဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ၂-ပတ်ကြာပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဤပြပွဲသည် MyJustice ၏ ၂၀၁၅မှစတင်ခဲ့သော ခရီးစဉ် ၄-နှစ်ပြည့် မြောက်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ MyJustice ကို ဥရောပသမဂ္ဂမှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပြီး ဗြိတိသျှကောင်စီမှ မိတ်ဖက်အဖွဲ့များနှင့် လက်တွဲအ‌ကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်သည်။ ပြည်သူလူထုအတွက် အခွင့်အရေးနှင့် ဥပဒေအသိပညာပေးခြင်း၊ တရားမျှတမှုစင်တာများနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြုဥပဒေ အထောက်အကူများမှ တရားမျှတမှုရရှိအောင် ကူညီပေးခြင်း၊ […]
ထိုင္းနိုင္ငံမွ ဆံပင္နွင့္ မိတ္ကပ္ပညာရွင္ ဆရာမ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးမည့္ “International Hair & Beauty Myanmar – IHBM 2020”
Art reflects everyday justice realities